झर्रोटर्रो : श्री ८ गनमहाराजको जय ! – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
- कैलुब्राह [email protected]
नेपाल मण्डलमा यतिखेर श्री ८ गनमहाराजको उदय भएको छ । गणतन्त्रका नयाँ राजा भएको हुनाले यिनलाई गनमहाराज भनिएको हो । श्री लेख्ने नेपाल मण्डलको मौलिक परम्परा र संस्कृति छ । सामान्य मनुखेलाई श्री मात्रै लेखिन्छ । अर्थात् नाउँका अगाडि एक थान मात्रै श्री लेखिन्छ । श्री ३ राणा सरखारलाई लेखिन्थ्यो । श्री ४ आफ्ना शत्रुलाई र श्री ५ राजा महाराजाहरूलाई लेखिन्थ्यो । श्री ६ आफ्ना बाआमालाई लेख्ने चलन थियो । त्यसैगरी श्री १०८ गुरुहरूलाई र श्री १००८ सदगुरु सचिदानन्द सरस्वतीलाई लेखिन्छ । अहिलेका महाराजलाई श्री ८ लेख्नु उचित हुने भएकाले नेपाल मण्डलका सरखार महाराजलाई श्री ८ लेखिएको छ । किनकि सात पर्देसका सात सरखार र तिनको मालिक सरखार केन्द्र, अर्थात् सङ्घ सरखार भएकाले आठ वटा कार्यकारी सरखारको रुपमा श्री ८ लेखिएको हो ।
यतिखेर श्री ८ गनमहाराज उखानप्रसाद बिरबिक्रमको शुभजन्मोत्सव धुमधामका साथ सुसम्पन्न भएको छ । मौसुफ सरखार यतिखेर उनासत्तरी बर्खमा उक्लिबक्सेको छ । यो अवसरमा मौसुफ सरखारको सर्वत्र जयजयकार मनाइएको छ । मौसुफ आफ्नो जन्मोत्सव अर्थात् बड्डे मनाउन उहाँले यस पिर्थिवीलोकमा पहिलो पाइला टेकको ठाउँ आठराईमा पुगिबक्स्यो । त्यहाँको सरखारले आफ्ना गनमहाराज उखानप्रसाद विरविक्रमको स्वागत सत्कार र जयजयकारका लागि आफ्नो आठराई राज्यभरीमा सार्वजनिक विदा गरेर महाराजप्रति सभक्तिभाव प्रकट ग¥यो । गाउँगाउँबाट, स्कूल स्कूलहरूबाट आएका चिचिला भुँडिला रैतीजनहर्ले मौसुफ सरखारको जयजयकार गर्दै बड्डे मनाउने स्थलमा भेला भए । मौसुफको बड्डेमा छ सात थान हेलिकप्टर परिचालित भएर गनमहाराजको जयजयकार गरे । एउटा हेलिकप्टरले काठमाण्डुबाटै बड्डेका लागि १५ किलोको केक बोकेर गयो । केकमा पनि आफ्नै देशको नक्सा बनाएर ल्याइयो । देशको मायाँ छातिभित्र कुनाकुनासम्म भएका खाँट्टी राष्टवादी गनमहाराज होइबक्सेकाले केकमा देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटिबक्स्यो र खाइबक्स्यो आनि ख्वाइबक्स्यो । त्यही भएर पो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्ना प्रभु गुज्जरमहाराजलाई उतैको नक्सामा मिलाउन दिइबक्सेको रहेछ । खाँटी राष्टवादीले त देशलाई केक बनाएर टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर खाँदा रहेछन् । यो पनि नयाँ गनमहाराजबाट जानकारी पाउने अवसर यो रैतीलाई प्राप्त भो ।
हात हातमा मौसुफ गनमहाराजको फुटा बोकेर, पूmलमाला, खादा, बोकेर बिभिन्न बाजागाजा सहितका झाँकीहरू, पञ्च कन्याहरू र पण्डितहरूले शान्ती स्वस्ती बाचन गरेर जयजयकार गर्दै मौसुफको बड्डे मनाइयो । यस्तो प्रकारले जयजयकार हिँजका प्रेत महाराजहरूको मनाइन्थ्यो । प्रेत महाराजहर्ले तीस बर्खसम्म यसरी नै आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँथे । तीस बर्ख अघि २०४७ सालबाट यो पर्था हटेको थ्यो । अहिले तीस बर्खपछि खोलो फक्र्यो र नयाँ महाराजको उदय भयो । पुरानो राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आएको हुनाले अहिले गनमहाराजका रुपमा उदय भयो । गनमहाराधिराज उखानविरविक्रमको जय !
नेपाल मण्डलमा कम्निस व्यवस्था ल्याउनी भनेर कम्निस पाटी खुलेका हुन् भन्ने बुभ्mयाथ्यो यो कैलुले । कम्निस व्यवस्था ल्याउन ठूला ठूला युद्ध पनि गरे कम्निस पाटीहर्ले । ऐलेका गनमहाराजले पनि अट्ठाइस सालमा झापा आन्दोलन गरेकै हुन् । उनले पनि वर्ग लडाइँ गर्नी भनेर हतियार उठा’कै हुन् । बाउनदेखि बैसट्ठीसम्म दुईनम्बरीको नेतृत्वमा बडेमानको युद्ध पनि भएकै हो । यीनै लडाइँबाट गणतन्तर पनि आएकै हो । गणतन्तरमा त कोई राजा महाराजा पनि हुन्नन् र कोई रैती पर्जा पनि हुन्नन् भन्ने सुनेको र अलिअलि पढेको पनि हो यो कैलुब्राहले । सबै जनता हुन्चन्, सरखार चलाउँदा मात्रै काम र जिम्मेवारीका कारणले ठूला र साना भएपनि कुर्ची बाहिर हुँदा सबै समान हुन्चन् भन्ने बुझेको हो यो कैलुले । तर त्यत्रो लडाइँ लडेर ल्याएको गणतन्तर त गनतन्तरमा पो बदलियो । गनतन्तरले त गनमहाराजधिराज पो जन्मायो त बरै । सङ्घीयता पनि जनतालाई आफ्नो मालिक आफैँ बनाउनका लागि हो भन्ने बुझिएको थियो । तर यहाँ त यो पनि भुरेटाकुरे र टोले राजाहरू जन्माउनमा परिणत भयो ।
हिज पञ्चप्रेतहर्को शासनकालमा राजालाई भगवान र रैतीलाई निम्छरा मनुखे भनिन्थ्यो । त्यसैले राजा महाराजाहर्लाई दर्शनभेट गर्न रैतीहर्ले फूलमाला, अक्षतापाती लिएर अबिरजात्रा गरेर, विभिन्न जातजातीका बाजागाजा बजाएर जयजयकार मनाउँदै महाराजको दर्शन गर्थे । महाराजको टाढैबाट भएपनि अनुहार पर्तक्ष देख्न पाए धन्य धन्य भइन्थ्यो र मरेपछि स्र्वग गइन्थ्यो भन्ने पथ्र्यो । त्यसैले राजाका जन्मदिनमा मण्डलैभरी विदा दिने, धुमधामसित जन्मोत्सव मनाउने गर्थे । दशैँमा राजाको बाहुलीबाट टीका थाप्दा जिउँदै स्वर्ग गएको महसुस् गर्थे रैतीजनले । अहिले पनि नयाँ गनराजा भएर उदाएको हुनाले श्री ८ गनमहाराज उखानप्रसाद विरविक्रमले पनि आफ्ना बाहुलीबाट रैतीजनलाई दशैँमा टीका बक्सने पर्था चलाइबक्सेको रैच । बल्ल पो कुरोको चुरो बुझियो । राजा हटाइयो भनेको त होइन रैच । बंशीय राजा हटेर चुनीय राजा र महाराजा पो स्थापना गरिएको रैच । पालिकाहर्मा पालिके बडाहाकिम अर्थात् कविला राजा । सात वटा पर्देशमा सात राजा र केन्द्रमा महाराजाको उदय भयो ।
गन महाराज श्री ८ उखानप्रसाद विरविक्रमको – जय !
किड्निप्रसाद महाराज – अमर रहुन् !
हाम्रा गनमहाराज हाम्रो केक – परान भन्दा प्यारो छ !